Computer Technical Notes & Sharing Softwares: November 2009
How to hack MSN Webcam
MSN webcam hacker isasoftware is used to accomplish msn webcam hack. Thus, using this software you can hack msn webcam of the victim. I have provided link for software download... just read on.
MSN Webcam Hacker-hack MSN Webcam:
It's very easy to hack msn using this "Webcam Hacker". Simply follow the steps below to hack MSN webcam.
1. Free Download MSN Webcam Hacker software to hack webcam on MSN
2. Unzip the file to obtain MSN Webcam Hacker to hack MSN webcam.
Note: Your antivirus will go mad on Webcam Hacker and will show your around 3-4 virus alerts. If you're cautious about safety, install Deep Freeze software and then try out this software to hack MSN webcam.
That's it friend. I hope you will find this tutorial on MSN Webcam hacker to hack MSN webcam easy. If you have any problem in using this MSN webcam hack, please mention it in comments.
Enjoy MSN Webcam hack to hack MSN Webcam...
Posted by SLIP at 4:53 AM0comments
တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ပြန်လျှင် သချာင်္တွက်စက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းမှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့်သချာင်္ ပညာရပ်များအားအသုံးပြု၍လုပ်ငန်းရပ်များအားအဆင်ပြေချော မွှေ့လွယ်ကူစေရန်ဖန်တီးယူထားသည့် စက်အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မှတ်တမ်းများသိမ်းဆည်းခြင်း (Datastorage)၊ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်း(Retrive)၊ အစီအစဉ်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်း(l/O Device)၊ စဉ်းစားတွက်ချက်ပေးခြင်း (Calculate) တို့အားလုပ်ငန်းစဉ်များ အလိုက်အသုံးပြုနိုင်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။
ကွန်ပျုတာအားတီထွင်ရန်စတင်စဉ်စားခဲ့စဉ် ထဲကပင်လုပ်ငန်း ရပ်အသီးသီး၌အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍တီထွင့်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။စတင်တီထွင်ခဲ့စဉ်အချိန်တွင် (Analog Computer) နှင့် (Digital Computer) ဟူ၍တည်ဆောက်ပုံနှစ်မျိုးရှိ့ခဲပါသည်။(Analog Computer)သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားရရှိမှုပမာဏ အနည်းအများပေါ်မူတည်၍အနီးစပ်ဆုံးဖော်ပြ ပေးခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါသည်။(Digital Computer)သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားအတိအကျရရှိမှုအ ပေါ်မူတည်၍လုပ်ဆောင်ပါသည်။
(abacus)အားအ ခြေခံ၍ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်တီထွင်လာခဲ့ကြပါသည်။ ၁၆၁၄ ခုနှစ်တွင်(John Napier)မှသချာင်္ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများအားအ ဆင်သင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် .၅ ဒဿမငါးနေရာအထိ
အ တိအကျတွက်ယူအ ဖြေထုတ်ပေးထားသောအ စီအ စဉ်(Logarithms)အားတီထွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။
၁၆၂၃ တွင် William Schickardမှသချာင်္တွက်စက်၏အ စဖြစ်သော(Mechanical Calculator) အားတီထွင့်ခဲပါသည်။ပထမဦးဆုံးစက်ကိရိယာဖြင့်တွက်ချက်ခြင်းအ စီအ စဉ်အားပြင်သစ်နိုင်ငံသား ဖြစ်သူသချာင်္နှင့်ဒဿနိကပညာရှင် Blaise Pascal မှ၁၆၄၂ ခုနှစ်တွင်တီထွင့်ခဲပြီး ၁၆၄၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ့်ခဲပါသည် ။
၎င်းကိရိယာအားအ လုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အ တွက်လက်ဖြင့်မောင်းနှင်ရသောဂီယာ(gear)များ၊စက်သီး (Pulley)များဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။၁၆၇၂-၁၆၇၄ခုနှစ်တွင် Gottfried Leibniz မှပထမဆုံး(Calculator) အားတီထွင်နိုင့်ခဲပါသည်။၁၈၀၁ ခုနှစ်တွင် Joseph Marie Jacquard ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့်အ လို လျောက်လည်ပတ်နိုင်သောယက်ကန်းစက်တစ်မျိုးဖြစ်သည့်(Analytical Engine) ကိုရရှိ့ခဲသည်။
၎င်းစက်မှာအ ပေါက်များစွာပါဝင်သောကဒ်ပြား (Punched-Card) များဖြင့်ထည့်သွင်းအ သုံးပြု့ခဲသည်။၁၈၂၀ တွင် Charles Thomas de Colmar မှပထမဆုံးပြည်စုံသောတွက်ချက်မှုအတိုင်းအတာအားတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
၁၈၂၂ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ Charles Babbage သည်ဓါတ်ခွဲစက်(Analytical Engine) တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အ ကြံရှိ့ခဲ၍၎င်းစက်တွင်မည်သည့်တွက်ချက်မှုမျိုးမဆိုပါဝင်ထည့်သွင်းထားသည်။သို့ရာတွင်၎င်းစက်အ တွက်လိုအ ပ်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအားတည်ဆောက်နိုင်ရန်အ တွက်မူယင်းအချိန်ကာလတွင်ပညာရှင်များအ နေဖြင့်များစွာမှအခက်အ ခဲရှိ့ခဲကြပါသည်။
၂၀ ရာစုနှစ်အ စောပိုင်းတွင်လေဟာမီးလုံး (Vacuum Tube) များအားအ သုံးပြုခြင်းဖြင့်ကွန်ပျုတာစက်မှုပညာမှအီလက်ထရောနစ်စနစ်သို့ကူးပြောင်းလာခဲ့ကြ၍ဂီယာ (Gear) နှင့်စက်သီး (Pulley) တို့အားမလိုအ ပ်တော့ချေ။လျှပ်စစ်ခလုတ်များမှတူညိသောရလဒ်အ ဖြေများကိုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
လေဟာမီးလုံး (Vacuum Tube) များမှာဂီယာ (Gear) နှင့်စက်သီး(Pulley)များထက်ပိုမိုတိကျစွာအ လုပ်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါသည်။ Charles Babbage စဥ်းစားထားခဲ့သည့် (Analytical Engine) မှာ ၁၈၃၀
ခုနှစ်ရောက်မှအ ပြီးသတ်ဖန်တီးနိုင့်ခဲပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏စဉ်းစားမှုများအားလုံးသည်ယနေ့ခေတ်ကာလအ သုံးချနေကြသော (Programmable Computer) အ ဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
၁၈၉၀ ခုနှစ်တွင်Herman Hollerith မှအ မေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းမှတ်တမ်းအတွက်ကဒ်ပြားများအားအ ပေါက်ဖောက်ခြင်းစနစ်(punched-Card System) အ ဖြစ်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင်Alan Turing မှကွန်ပျုတာ၏သချာင်္ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီများအား တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ့်ခဲသည်။၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် Konrad Zuse မှ(Boolean) အက္ခရာသချာင်္စနစ်အားအသုံးပြု၍ပထမဆုံး (Binary Caculator) အ ဖြစ်တည်ဆောက့် ခဲသည် ။
ပညာရပ်များအားလျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြင့်အ ဓိကအသုံးပြုထားပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော (J V Atanasoff-Barry) ကွန်ပျုတာအား အ မေရိကနိုင်ငံတွင်တီထွင့်ခဲသည်။၎င်းစက်အားပထမဆုံး လေဟာမီးလုံးတွဲများနှင့်အ သုံးပြုဖန်တီးတည်ဆောက်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းစက်မှာလုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုအ တွက်သာပုံဖော်ထားပါသည်။ သို့ရာတွင်အ လွန်ရှည်လျားသောသချာင်္ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇယားကြီးများ၏တွက်ချက်မှုများအားတစ်ခုချင်းစီအ နီးစပ်ဆုံးတွက်ချက်နိုင်အောင်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မဆိုထားဘိကွန်ပျူတာဌာနပင်မရှိသေးမီက (၁၉၇၃ ခုနှစ်မတိုင်မီက ) တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏သင်္ချာဌာနလက်အောက်တွင်တွက်ချက်ရေးယူနစ် အ ဖြစ်စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိသည်။ လူဦးရေ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုသော ကိစ္စရပ်များကိုကူညီဆောင်ရွက့်ခဲရကြောင်းလည်းသိရသည်။ စက္ကူ ကဒ်ပြားများကိုစက်ဖြင့်အပေါက်ဖေါက်ပြီး သုံးရသောစနစ်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပီစီမဟုတ်သေးသော ကွန်ပြူတာများ တစ်စတစ်စ ရောက်ရှိလာပြီး
MCCအမည်ဖြင့်ကွန်ပြူတာပညာဆင့်ပွါးပေးသောအစုအ ဖွဲ့ရှိခဲ့ဖူးပြီး ကွန်ပြူတာသင်တန်းကျောင်း လုံးဝမရှိဆိုဟုသည်။ ရှေးဦးစွာရောက်ရှိလာသော PC တို့တွင်လည်း CD ROM, Sound card, Mouse စသည်တို့မပါဝင်သေးပဲ DOS Version ဖြင့်ပင် Run နိုင်သော စာစီစာရိုက်အ တွက် (WordStar) စာရင်းဇယားဆွဲရန် (Foomtools) စသည့်ဆော့ဖ်ဝဲများသုံးကြရသည်ဆိုပါသည်။
နောက်ပိုင်း (Wordperfect 5.1) ပေါ်ပေါက်လာပြီး (Dbase 4), (Lotus 1-2-3) စသည်တို့အ ပြင် (Harbor Graphic3), (AutoCAD) စသည်တို့ ကိုပါသုံးစွဲလာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ WINDOWS OS ပေါ်လာသော အ ပြောင်းအ လဲပြီးသည့်တိုင် မြန်မာပြည်တွင်ကွန်ပြူတာမြင်သိထိတွေ့ဖူးသူအလွန်နည်းပါးပြီး WINDOW 95 ပေါ်ပေါက်လာပြီးမှတစ်စတစ်စပြည်သူလူထုအတွင်း ကွန်ပြူတာသုံးစွဲနိုင်သောအ ခြေအ နေရောက်လာခဲ့ပါသည်။
သင်ကြားရေးတွင်မူ WINDOWS 3.1 ခေတ်ကပင် CSS, RS, MCC စသော သင်တန်းအ ဖွဲ့အ စည်းများလဲပေါ်ထွန်းလာပြီး။ ACE, KMD စသည်အဖွဲ့အ စည်းများလည်းဆက်လက်ပေါ်ပေါက်လာကြောင်းသိရပါသည်။
ကွန်ပြူတာဂျာနယ်သည်လည်း မြန်မာ့ကွန်ပြူတာသမိုင်းတွင် အ ရေးပါသောအ ခန်းမှပါဝင်နေကာ အ ကျိုးပြုပံ့ပိုးကူညီနိုင့်ခဲပါသည်။
ဒင်းနစ်ဝင်းသိန်း၏အ စီအ စသ်ဖြင့်အ ချို့အ ခြေခံပညာကျောင်းများအ တွက် LC630 Macintosh ကွန်ပြူတာများအ ကြွေးရောင်းချပေးခဲ့ရာမှ မြို့ငယ်လေးများ၏အထက်တန်းကျောင်းများပါ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် Clone PC များဝယ်ယူသိမ်းဆည်းပြသသောအ လေ့၊ Multimedia classroom များဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သောဓလေ့များထွန်းကားခဲ့သည်ဆိုပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး Network ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်သောလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သော်လည်း အင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်မသုံးနိုင်သေးပဲ အင်ထရာနက်သုံးကြရသည်ဆိုပါသည် ။
Dial up စနစ်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတို့မှာ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင်သုံးစွဲခွင့်မရှိသောကန့်သတ်ပစ္စည်းဖြစ့်ခဲရပြီး
နောင်A ခါ IP Star စလောင်းများဖြင့် Internet ချိတ်ဆက်အ သုံးပြုမှုအ ထိ ကျယ်ပြန့်လာသည်ဆိုပါသည်။
ကွန်ပြူတာဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင်စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းမှာစီးပွားဖြစ်အသွင်ဦးစွာပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ ကွန်ပြူတာဖြင့် ဇာတာဖွဲ့ပေးခြင်းစသည်တို့လည်းပိုမိုစောစီးစွာပေါ်ပေါက်ဖူးသည်ဆိုပါသည်။စာစီရာမှ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ ထိုမှတဆင့်စီဒီဗီဒီယိုအခွေကူးခြင်း/ MP3 ပြောင်းပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း ဓါတ်ပုံအ ခွေထုတ်ခြင်းဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးခြင်း၊ ဂိမ်းဆိုင်များ ဖွင်ခြင်းတို့နှင့်အတူဆိုင်ဘာကဖေးဆိုင်များ ပေါ်ထွန်းလာသည်အ ထိကမ္ဘာနှင့်အ ညီရင်ဘောင်တန်းလိုက်လာနိုင်သလို IT ပညာရှင်များလည်း အထိုက်အ လျောက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးကွန်ယက်များချိတ်ဆက်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားရောင်းချခြင်း။ Web
page ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြော်ညာပေးခြင်း စသည့်အ တတ်များလည်းတတ်ကျွမ်းလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဟက်ကာများလည်း ရှိသည်ဟုကြားသိနေရပါသည်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ... သေချာတာတော့ .. “ကွန်ပျူတာ”ဟာ electronic device (ပစ္စည်း) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဟိုးလွန့်ခဲတဲ့နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်လောက်တုန်းကရှေးခေတ်လူသားတွေ သုံးခဲ့တဲ့ … “ပေသီး” (သို့) ဂဏန်းပေါင်းစက် (Abacus) ခေတ်ကို ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီ (Abacus) “ပေသီး”ကနေ အ ခြေခံပြီး .. လူတွေဟာ ဂဏန်းပေါင်းစက်တီထွင်လာနိုင်သည်အ ထိ .. ဉာဏ်ရည်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ် .. ။ အဲဒီဂဏန်းပေါင်းစက်မှတစ်ဆင့် .. မှတ်ဉာဏ် (Memory) ပိုမိုကောင်းမွန် .. တွက်ချက် (processing)နိုင်သော
ကွန်ပျူတာတွေအ ထိတီထွင်တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ် … ။ကွန်ပျူတာရယ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့်လည်း .. ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ရှေးသမိုင်းကြောင်းတွေထပ်ရှိပါသေးတယ် … ။
ဒီအ ပင်ကိုဘယ်လိုစိုက့်ခဲလဲ .. မြေသြဇာဘယ်လိုသုံးရလဲ .. မြေသြဇာအ တွက် … နွားချေးဘယ်နှစ်ပိဿာ ထည့်ရတယ်… အဲဒီအပင်က စိုထိုင်းတဲ့နေရာမှာ ပေါက်တာလားပြီးတော့ခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှပေါက်တာလား စသည်ဖြင့် .. ပုံစံတွေနဲ့ ..လေ့လာမယ်ဆိုရင် .. ဒါက စိုက်ပျိုးရေးသမား အလုပ်ဖြစ်သွားပါပြီ ..။
ပိုဆိုးတာက .. နည်းပညာ (Technology) ဆိုတာကလည်း .. အ ချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲတိုးတက် (update) အ မြဲဖြစ်နေတဲ့အ ချိန် .. ။ဒီအ ချိန်မှာ ကိုယ်က သမိုင်းကြောင်းပဲအ သေးစိတ်ပြန်သွားပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင် .. အ ကြိုးထူးလာနိုင်ဖို့နည်းလမ်းနည်းပါတယ် .. ။
မြောင်းကြီးကြီးခုန်ဖို့နောက်ကိုခြေ(၂)လှမ်း၊ (၃)လှမ်းလောက်လှမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ .. အရှိန်နဲ့ပြေးခုန်လိုက် .. ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဟိုဖက်အခြမ်းက .. Update Technology ကိုမရောက်စရာ အ ကြောင်းမရှိပါဘူး .. ။
Labels: ကွန်ပျူတာ သမိုင်း